Ahoana ny fomba hiterahana fitarihana B2B bebe kokoa miaraka amin'ny atiny | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 23, 2015 Talata, Jolay 21, 2015 Douglas Karr
Ny filankevi-pitantanana (CMO) dia nanangana a ny fandinihana vaovao dia miompana amin'ny fomba ahafahan'ny varotra mamokatra amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fitarihana varotra mahay amin'ny alàlan'ny atiny fitarihana eritreritra mampientanentana - asa izay voaporofo fa tolona ho an'ny mpivarotra ankehitriny. Raha ny tena izy, 12% fotsiny ny mpivarotra mino fa manana motera marketing atiny avo lenta izy ireo izay voalamina ara-stratejika hikendrena ireo mpihaino marina miaraka amin'ny atiny mahaliana sy maharesy lahatra.
Ny tsy fahombiazana ambony izay misy ny fiantraikan'ny isan'ny fisintomana na ny fisoratana anarana dia:
48% ny mpivarotra tsy mandroso atiny namboarina ho an'ny mpihaino kendrena.
48% ny mpivarotra no tsy mizara teti-bola ampy mamorona atiny manintona sy manam-pahefana.
44% ny mpivarotra no tsy mamokatra atiny misy ifandraisany na misy dikany amin'ny mpihaino samihafa.
43% ny mpivarotra no mamorona atiny izay tsy mahatratra ny mpanapa-kevitra mety manerana ny fikambanana.
39% ny mpivarotra no tsy manararaotra ireo fantsona fizarana marina ary ny fahafaha-manao syndication hanamafisana ny tratra.
B2B Lead Generation miaraka amin'ny atiny dia mitaky ireo fomba fanao tsara indrindra ireo
Ampiasao ny fizarana atiny sy ny fizarana syndication mahomby.
Tsinjarao ny atiny ho an'ny loharanom-baovaon'antoka misy sy antoko fahatelo.
Mamorona atiny fitaizana mitarika.
Ampifanaraho amin'ny atiny ny mpihaino.
Mametraha fiaraha-miasa feno eo marketing sy varotra.
Ny fandalinana, Fandehanan'ny firaka izay manampy anao hitombo, mahita ny ankamaroan'ny orinasa tsy manana firaisan-kina amin'ny atao hoe tena fitarihana varotra. Izy ireo koa dia tsy miara-miasa am-pahombiazana amin'ireo vondrona varotra sy fampandrosoana mba hamoronana fampifanarahana amin'ny paikadim-pandrosoana, lohahevitra ary fandaharam-pisondrotana.
Ity tatitra ity dia manasongadina ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny mpivarotra ambaratonga ambony amin'ny indostria marobe, ankoatry ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpitantana marketing ao amin'ny IBM, SAP, Thermo Fisher Scientific, OpenText, CA Technologies ary Informatica. Ny fikarohana dia manome fomba fijery lalina sy tsara momba ny fomba fitantanana ny paikadim-barotra momba ny atiny, ny fomba fandrefesana ny zava-bitan'ny atiny, ary ny habetsaky ny atiny fonosina, ampiroboroboana ary ampiarahina mba hamoahana fitarihana firaka tsara indrindra.
Tags: b2bmarketing amin'ny atiny b2bb2b mitarika taranakab2b mitaiza fitarihanapaikady fitarihana b2bmitarika b2bcmofilankevitra cmo
Fanombanana ny Marcom: Fomba fanandramana fanandramana A / B
Sep 22, 2015 amin'ny 6: 09 AM
Lahatsoratra tena manazava. Te-hamaky lahatsoratra mitovy amin'izany. Misaotra
Mar 13, 2017 amin'ny 8: 54 AM
Douglas, faly tokoa nahita ny bilaoginao sy ny fitaovanao ary tombony ho azy rehetra. Votoatiny namboarina, mpihaino kendrena, mpitarika B2B, ireo rehetra ireo dia hevitra tsara sy tadiavina. Ahoana ny hevitrao momba ny famindrana ivelany an'ity dingana ity amin'ny orinasa mpitarika B2B izay miompana indrindra amin'ny fampiharana ireo voalaza etsy ambony ho lasa fampielezan-kevitra lehibe iray? Mijery boaty fiantsoana, bant.io ary leadgenius aho. Misaotra anao nanampy.
Mar 13, 2017 ao amin'ny 8: PM PM
Salama John! Ity dia ho resaka tsara ho an'ny anay Fiarahamonina MarTech - azafady mba midira ary apetraho!
Apr 4, 2017 ao amin'ny 3: PM PM
Tiako ny fikarohana natao tamin'ity lahatsoratra ity. Ny fahombiazana amin'ny marketing amin'ny atiny dia sarotra kokoa noho ny andrasan'ny ankamaroan'ny mpivarotra- indrindra ao anatin'ny orinasa madinidinika manana teti-bola voafetra, mpiasa ary fahaizana manokana.